Go’aan laga soo saaray dacwad loo heystay mas’uuliyiin lagu eedeeyay burburinta masaajid | Hangool News
Go’aan laga soo saaray dacwad loo heystay mas’uuliyiin lagu eedeeyay burburinta masaajid
Hangoolnews:- Maxkamad ku taalla Hindiya ayaa go’aamisay in wax danbi ah aanay gelin mas’uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga haya talada oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dhacdo lagu burburiyay masaajid sanadkii 1992-dii.
Ra’iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Hindiya LK Advani iyo hogaamiyeyaal ka tirsan xisbiga BJP oo kala ah MM Joshi iyo Uma Bharti ayaa beeniyay in ay ku dhiirigeliyeen shacabka Hinduuga inay burburiyaan masaajidka Babra ee ku yaallay magaalada Ayodhya.
Qalalaasihii ka dhashay burburinta masaajidka waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay 2,000.
Waxay tallaabadaas kamid aheyd dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed ee xisbiga garabka midig ee u jaanjeera Hinduuga.
Maxkamadda ayaa maanta wax dambi ah ku waaysay 32 qof oo kamid ahaa dadkii lagu soo eedeeyay dhacdadan, 17 qof oo kamid dadkaas ayaa geeriyooday xilli ay socotay dacwaddooda.
Maxkamadda waxay sheegtay in caddeymo buuxo aanan loo heyn arrinta ah in horey loo soo qorsheeyay burburinta masaajidka.
Qoraalka sawirka,Waa sawirka masaajidka oo koox dhalinyaro ah ay burburineyso sanadkii 1992-dii
Dadka Hinduuga ayaa rumaysan in goobta uu masaajidkan ka dhisan yahay ay tahay goobtii uu ku dhashay ninka ay caabudaan ee, Lord Ram, waxayna doonayaan in halkaasi ay macbad ka dhistaan.
Sanadkii lasoo dhaafay ayay aheyd markii maxkamada ugu sareysa dalka Hindiya ay xukuntay in lahanshiyaha goob uu ku yaalay masaajid lagu wareejiyo dadka haysta diinta Hinduuga.
Maxkamada ayaa amartay sidoo kale in Muslimiinta la siiyo goob kale oo ay masaajid ka dhistaan.
Muran ka dhashay guurka nin Muslim ah iyo gabadh Hinduu ah oo go’aan laga gaaray
Hindiya: Maxkamad amartay in dhul uu ku yaallay Misaajid lagu wareejiyo Hinduuda
Dadka Hinduga iyo Sikha dalka Hindiya oo wax ka dhisaya masaajid
Bishii Agoosto, Ra’iisul wasaare Narendra Modi ayaa dhagax dhigay macbadka Hinduuga ee laga dhisayo dhulka masaajidka, waana tallaabo kamid aheyd ballan qaadyada xisbiga haya talada ee BJP, waxay aaminsan yihiin in macbadkan uu yahay astaan muujineyso qaranimada dadka Hinduuga.
Guddiga arrimaha sharciga qaabilsan ee u doodo muslimiinta Hindiya ayaa sheegay inay racfaan ka qaadan doonaan go’aankan kasoo baxay maxkamadda sare.
Dad badan oo indhadheeyo siyaasadda Hindiya waxay sheegayaan in arrintani ay sare u sii qaadi karto gacan bidxeynta iyo tabashada ay qabaan muslimiinta gaaraya 200 malyan ee laga tiro badan yahay ee ku nool Hindiya.
Hogaamiyeyaasha mucaaradka iyo siyaasiyiinta qaar ayaa dhaleeceeyay go’aanka kasoo baxay maxkamadda.